Iworkshop evunyiweyo ye-RCGP-Isiseko soMvuzo
Ikhaya I-RCGP Workshop eVunyelweyo
I-Reward Foundation inikwe iwonga eliqinisekisiweyo le-RCGP lokuhambisa umasifundisane wosuku olunye owamkelweyo yiRoyal College of General Practitioners e-United Kingdom. Impembelelo ye-Intanethi ye-Intanethi kwiMpilo yengqondo kunye neMpilo. Sithengisa ngoku njenge Iifografi kunye neengxaki zobundlobongela. Inika amanqaku e-7 e-CPD yinguqulelo yosuku olupheleleyo kunye neekhredithi ezi-4 zoluhlobo lwentsuku-yesiqingatha. Unokufumana iinkcukacha ezithe kratya zekhosi nganye okanye uqale ngokubhukisha ngokunqakraza eli khonkco.
I-RCGP liqumrhu lobulungu lobungcali kunye nomgcini wemigangatho yoogqirha bosapho abasebenza ukukhuthaza ukugqwesa kukhathalelo lwempilo olusisiseko. NjengoGqirha oQhelekileyo (GP), ukugcina ulwazi lwakho kunye nokugcina izakhono zakho zisemgangathweni ngoPhuculo loQeqesho oluQhubekayo (CPD) luxanduva lobungcali. Ii-GPs ziyacelwa ukuba zenze iikhredithi ezingama-50 (iiyure) zoQeqesho oluQhubekayo lweMfundo rhoqo ngonyaka njengenxalenye yenkqubo yabo yokuqinisekiswa kwakhona kobungcali.
The Imigaqo esisiseko yoPhuhliso loBuchule oluQhubekayo ovela kwiAkhademi yeekholeji zaseRoyal Medical ubonelela ngesikhokelo malunga nendlela abafanele ukwenza ngayo ii-CPD zabo. Le khosi inokuchaphazeleka ekufumaneni iikhredithi ze-CPD zamalungu ezi kholeji zilandelayo zeRoyal Medical:
Icandelo lezeMpilo yezeSondo kunye nokuzala
Ikholeji yaseRoyal yama-Obstetricians kunye neeGynecologists
Ikholeji yaseRoyal yaBantwana kunye neMpilo yaBantwana
Ikholeji yaseRoyal yamaGqirha e-Edinburgh
Ikholeji yaseRoyal of Physicians yaseIreland
Ikholeji yaseRoyal yoGqirha baseLondon
Ikholeji yaseRoyal yamaGqirha kunye nabaGqirha baseGlasgow
Ikholeji yaseRoyal yoNyango lweeNgqondo
Ikholeji yaseRoyal yoGqirha base-Edinburgh
Ikholeji yaseRoyal yoGqirha baseNgilani
Ikholeji yaseRoyal of Surgeons yaseIreland
Icandelo leForensic and Legal Medicine
Ikhosi yethu ikwavuleleke kumagqwetha, abafundisayo kunye nezinye iingcali. Umbutho Wezomthetho waseScotland uyayamkela kwi-CPD phantsi komgaqo-nkqubo wabo wokuzazisa.
Impembelelo ye-Intanethi ye-Intanethi kwiMpilo yengqondo kunye neMpilo
Umasifundisane wethu wosuku olunye unikezela ngeyure ezi-6 zokufundisa ubuso ngobuso kunye neyure yokufunda ngaphambi kokufunda, ukuhambisa ukuya kuthi ga kwiiyure ze-7 zeekhredithi ze-CPD.
Inguqulelo yesiqingatha seentsuku zocweyo iyafumaneka xa iceliwe. Ikhosi epheleleyo inokuhanjiswa njengeeseshoni zentsuku ezinesiqingatha ngaphezulu kweentsuku ze-2 okanye iiseshoni zeyure ezi-2 ngaphezulu kweentsuku ezi-3.
Umxholo wekhosi uxhomekeke ngokupheleleyo kubungqina kwaye unika ithuba elifanelekileyo lokufunda nokubonakalisa ingxoxo. Ibandakanya:
Iinkcazo zemicimbi yezempilo yesondo enxulumene nemifanekiso engamanyala
Isiseko sobuchopho ngokubhekisele kwikhoboka leziyobisi
Ukusetyenziswa koonografi kunye neempembelelo zayo
Impembelelo kwimpilo yomzimba
Impembelelo kwimpilo yengqondo-yabantu abadala nakwishumi elivisayo
Imiceli mngeni ekusebenzeni
Izixhobo zokufundisa zibandakanya izincedisi ezixhasayo. Abazimasi baya kuba nokufikelela kuluhlu lwezixhobo ezikwi-Intanethi, kubandakanya amakhonkco abanzi kumaphepha ophando asisiseko.
Ukuba ungathanda ukuba iSiseko soMvuzo sihambise le workshop kwi-practice yakho, iRoyal College okanye iBhodi yezeMpilo, nceda usilahle inqaku usebenzisa ifom yoqhagamshelwano ngasezantsi kweli phepha. Sinamava ekufundiseni e-USA naseYurophu iphela.